2022 XNUMX oro မေလ XNUMX | eToro တွင်ကူးယူရန်အကောင်းဆုံးကုန်သည်များ အပြည့်အဝစတင်လမ်းညွှန်
eToro5သင်ယူ 2022 ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်မှထိပ်တန်းကုန်သည် ၅ ယောက်!
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 23 မေလ 2022
eToro ရှိကုန်သည်များ၊ ရာပေါင်းများစွာသောဆူညံနေသောကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်ရေးတွင်းကြီးတစ်ခုတွင်မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုတွင်အော်ဟစ်။ ဟောင်နေသည့်မြင်ကွင်းကိုယနေ့ခေတ်တွင်တွေ့ရလေ့မရှိသဖြင့်လူများစွာအွန်လိုင်းတွင်ရောင်းဝယ်နေကြသည်။
သင်တစ်ဦးဆိုရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ် မင်းရဲ့ခြေထောက်ကိုရှာလိုက်ရုံနဲ့၊ အခု မင်းပိုပြီးအောင်မြင်ပြီး ရာသီသွေးရှိတဲ့ ကုန်သည်တွေရဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေကို အလွယ်တကူ အတုယူနိုင်ပါပြီ။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဟုခေါ်သောမျှတသောအသစ်သောဖြစ်ရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဤကုန်သွယ်မှုအသိပညာကိုရနိုင်သည်။
ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုကူးယူခြင်းဆိုသည်မှာသင်ကိုယ်တိုင်အိမ်စာမလုပ်ရဟုဆိုလိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကအန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကကုန်သွယ်မှုသဘောသဘာဝပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကူးယူရောင်းဝယ်မှုမြင်ကွင်းကိုအဓိကအားဖြင့် eToro ကလွှမ်းမိုးထားပြီးယခုအခါကုန်သည် ၁၂ သန်းကျော်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
သင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်စေရန်သင့်အားကူညီရန် weToro တွင် အကောင်းဆုံးကုန်သည် ၅ ဦးအတွက် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုကို စုစည်းထားသည်။ ၎င်းသည် သင်စတင်ရန် နှင့် အရေးကြီးသော ကော်ပီကူးသန်းခြင်းဆိုင်ရာ သင်သိထားရမည့်အချက်များကိုလည်း အကျုံးဝင်သည် - သင့်နှင့်ကိုက်ညီသော သက်တမ်းရင့်ကုန်သည်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများ ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။
eToro5ရှိထိပ်တန်းကုန်သည် ၅ ဦး
ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်သောမိတ္တူကုန်သည်များရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့် eToro ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသင်ကူးယူရန်နှင့်ပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်ရန်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ လုပ်ရမယ့်အရာကသူတို့ခါးပတ်အောက်မှာမိတ္တူကူးထားသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုရွေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်စိတ်ဝင်စားသည့်အရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ eToro ရှိအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအချို့သည်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ထွန်းလင်းလိမ့်မည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် eToro5တွင်အကောင်းဆုံးကုန်သည် ၅ ဦး ကိုအတူတကွစုစည်းထားပြီးတစ်ခုစီနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြထားသည်။
eToro တွင်အောင်မြင်သောကူးယူရောင်းဝယ်သူထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဂျေးအက်ဒွပ်စမစ်သည်လက်ရှိတွင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကူးယူခံရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်းကော်ပီကူးသူ ၁၂,၃၈၁ မှုနှင့် ၂၄.၆၁% ပြန်လာသည့်အခါ eToro အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားအလွန်နှစ်သက်သည်။
ယခုအချိန်ပြည့် eToro ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဂျေးအက်ဒွပ်စမစ်၏ (၃၁) နှစ်မှာအခြေစိုက်သည် Basingstoke, အင်္ဂလန်။ သူသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ Esports မန်နေဂျာနှင့်ဘဏ္,ာရေးစျေးကွက်များ၊ crypto, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ဘောဂဗေဒနှင့်နည်းပညာတို့၏အကျိုးစီးပွားများနှင့်အတူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။
ဤကုန်သည်သည်အနည်းဆုံးမိတ္တူကူးရန်အကြံပြုချက်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ရှိသော်လည်း $ 500 + ကိုအကြံပြုပါသည်။ သူ၏အစုရှယ်ယာများထဲမှအကောင်းဆုံးကိုရယူရန်သူ့ကိုကုန်သွယ်ရန် ၂ နှစ်နှင့်အထက်ကူးယူရန်လည်းအကြံပေးသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိမိတ္တူပိုင်ဆိုင်မှု $5သန်းကျော်နှင့်အတူ, ဂျေးသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (ဇူလိုင်အထိ) အစိမ်းရောင်တွင် ၃၅.၂၀% နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် - သူသည်မကြုံစဖူးအမြတ်ငွေ ၅၂.၃၂% ရရှိခဲ့သည်။
စွန့်စားမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၅ တွင် - ဤကုန်သည်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာတွင် -
Using minimum leverage (x2 at the most).
Using fundamental, technical and sentimental analysis.
Main trades are stocks and cryptocurrency.
အန္တရာယ်ရမှတ် - ၅
* အကယ်၍ သင်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကအမြတ်အစွန်း ၂၈၁.၀၀ ဒေါ်လာရရှိလိမ့်မည်
၂။ Olivier Jean Andre Danvel
ဤကုန်သည်သည်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသောမိတ္တူကူးသူ ၉,၈၀၇ ရှိပြီးလွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း ၆.၃၈% ပြန်လာသည်။ eToro တွင်ဒေါ်လာ ၅ မီလီယံကျော်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ Olivier တွင်တင်းကြပ်သောငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်တစ်လလျှင် ၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသောစွန့်စားမှုနည်းသောကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာရှိသည်။
Olivier သည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကာလအတွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာတစ် ဦး အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ဖြစ်သည် Forex ကုန်သွယ်, အထူးသဖြင့်။ သူသည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဘဏ္articlesာရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတင်းများကိုလေ့လာသည်။
2019 ခုနှစ်တွင်, ဒီကုန်သည် 8.40% ၏ပြန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ၂၀၂၀ ၏ပထမခြောက်လတွင်သူသည်အစိမ်းရောင် ၂.၂၇% ၌ရှိသည်။ Olivier Jean Andre Danvel ၏အစုစုကိုဖွဲ့စည်းထားသည် -
အနည်းဆုံးမိတ္တူကူးယူရန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ နှင့်အန္တရာယ်အဆင့် ၂ နှင့်သင် Forex trading ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားပါက Olivier သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကျိုးအမြတ် - ၆.၃၇%
* အကယ်၍ သင်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကအမြတ်အစွန်းမှာဒေါ်လာ ၆၅.၀၀ ဖြစ်သည်
၃။ Jeppe Kirk Bonde
Jeppe သည် eToro ရှိကူးယူမှုအများဆုံးကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်သူများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်မြင့်ပေါ်တွင်ကူးယူသူ ၈,၃၆၀ ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လတာကာလအတွင်းသူသည် ၂၃.၁၉% အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်။ 8,360 ခုနှစ်တွင် Jeppe တွင်အထင်ကြီးလောက်သောအမြတ်အစွန်းသည် ၄၅.၅၅% ရှိပြီးအများအားဖြင့်အစိမ်းရောင်လတွင်ဖြစ်သည်။
သူသည် ၂၀၂၀ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်စိမ်းလန်းစိုပြေနေပြီး ၈.၃၃% ရှိသည်။ သူ၏နောက်ခံသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံးဘဏ်အချို့ကိုအကြံပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ သူသည်ဘဏ္financeာရေးနှင့်မဟာဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှု၌မဟာဘွဲ့ရရှိထားသည်။
Jeppe သည်စွန့်စားမှုအဆင့် ၅ နှင့်သူ၏နည်းဗျူဟာတွင် -
Executing fundamental valuations.
Studying trends in markets from around the world.
Uses hedging and diversification to manage portfolio risk.
Usually avoids leverage where possible.
သင်၏အမှာစာများကိုထင်ဟပ်နိုင်စေရန်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၃၀၀ အနည်းဆုံးရှိသောအစုရှယ်ယာဖြင့်ပွင့်လင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုကူးယူရန်အကြံပြုလိုသည်။
၄။ Heloise Greeff
ဤကူးယူရောင်းဝယ်သူသည်ကူးယူသူ ၁,၄၉၈ ခုရှိပြီးလွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း ၂၆.၃၉% ပြန်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် Heloise Greeff သည်အမြတ်အစွန်း ၂၀.၁၉% ပြန်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ၏ပထမခြောက်လတွင် ၁၇.၇၄% အမြတ်ရရှိခဲ့သည်။
Heloise သည် Oxford တက္ကသိုလ်မှ MBA ဘွဲ့ရရှိထားပြီး၊ သို့သော်သူသည် 'လဲလှယ်သောကုန်သွယ်ရေးရန်ပုံငွေများ' (ETFs) နှင့်ညွှန်းကိန်းများတွင်လည်းပါဝင်သည်။
Heloise Greeff ၏အစုရှယ်ယာသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Heloise ၏ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်အချို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Pharma and tech.
Machine learning and technical analysis.
Spreading risk, achieving good returns.
အနိမ့်ဆုံးအကြံပြုမိတ္တူပမာဏကို $ 1,000 ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏အကြီးမားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချို့မှာ Aalesforce.com (၅.၄၀%)၊ Mastercard (၅.၃၆%)၊ Microsoft (၄.၅၀%) နှင့် Visa (5.40%) တို့ဖြစ်သည်။
၅။ Teoh Kai Liang
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်လူကြိုက်များသောအခြားကူးယူရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး မှာကူးယူသူ ၇,၇၄၀ ရှိပြီး Teoh Kai Liang ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း Teoh သည် ၅၅.၉၂% အမြတ်ပြန်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ကုန်သည်သည်သူ၏ခါးပတ်အောက်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၅ သန်းကျော်ရှိသည် 2019 တစ် ဦး တည်း၌သူ 46.65% ၏အမြတ်အစွန်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယခုနှစ်တွင်သူ၏အမြတ်သည် ၃၇.၆၆% တွင်ရှိနေသည်။
Teoh သည်အများအားဖြင့်စတော့ရှယ်ယာများရောင်းဝယ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သူ့ကိုကူးယူလိုပါကသင်အဓိကအားဖြင့်အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာများရောင်းဝယ်ရန်ပြင်ဆင်ထားရမည်။ အရေးကြီးသည်မှာသူသည်ရေရှည်ရာထူးများကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။
Long term investments..
Copy Trading ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ယနေ့ခေတ်တွင် Tom, Dick နှင့် harry တိုင်းသည်ဘဏ္marketsာရေးဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။ လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပါအ ၀ င်လူတိုင်းသည်ယခုအခါသူဌေးများ၏ကစားကွင်းကိုလက်လှမ်းမီနိုင်ပြီဟူသောအချက်သည်အလွန်ကြီးကျယ်လှသည်။
သို့သော်သင်သည်အာရုံကြောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်နေသေးလျှင်၊ သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောကတွင်ခြေလှမ်းမလှည့်ပါက - ကူးယူကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းသည်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သမျှတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အရေးအကြီးဆုံးမှာ - ၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရန်သင်ယူခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကဖွင့်ထားသောလူမှုမီဒီယာအကောင့်များမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပုံစံများကိုခဏတာတွေ့ကြုံနေရသည် အကြံဥာဏ်တစ်ခုမှာသင်သည်အလားတူကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များရှိသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုသင်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာနိုင်ပြီးအချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဇယားများကိုမျှဝေသောကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်အကြံဥာဏ်များရယူနိုင်သည်။
ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက် မိတ္တူကုန်သွယ် အဲဒါဟာလူမှုရေးအရဖြစ်ခြင်းထက်ငွေရှာဖို့ဖြစ်တယ်။
The copy trader you decide on is going to use their skills to trade on your behalf (and anyone else copying them). All you have to do is decide how much to ‘copy’. This means how much money are you willing to put forward for the investor to trade with.
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမိတ္တူကူးခြင်းဖြင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ကုန်သွယ်မှုကိုသင်ကူးယူနိုင်သည် ဆုံးဖြတ်ချက်များပိုကောင်းဘို့သို့မဟုတ်ပိုဆိုးဘို့။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုကူးယူရန်ရွေးချယ်သောအခါသူတို့သည် ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လည်း ၀ ယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ မိတ္တူကူးကုန်သည်ရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါသင်လည်းရောင်းသည်။ သင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး၊ နောက်ဆုံးမှာတော့သင်ဟာကုန်သွယ်မှုကို passive ပုံစံနဲ့ရတော့မှာပါ။
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကူးယူရောင်းဝယ်မှုရဲ့ယန္တရားဟာတစ်ပိုင်းတစ်စကိုခွဲဝေချထားပေးလိုက်တာပါ သင့်ရဲ့ ၏အစုစုနှင့်အတူကုန်သွယ်အစုစု အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည် - သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါ။
မည်သည့်ကုန်သည်များသင်ကူးယူလိုသည်နှင့်မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်သူတို့ဖွင့်လှစ်ထားသည့်မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုကိုမဆိုသင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်သို့ကူးယူလိမ့်မည်။ မိတ္တူကူးသည့်ကုန်သည်သည်သင်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုချမှတ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးကိုသုံးမှာဖြစ်လို့ကုန်သည်သည်မဆင်မခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့် eToro တွင်ရွေးချယ်ရန်ကူးယူရောင်းဝယ်သူထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ကျဆင်းခြင်းမပြုမီအိမ်စာအချို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့် eToro ရှိအကောင်းဆုံးကုန်သည် ၅ ဦး တို့၏လမ်းညွှန်၏ဤအခန်းတွင်ယနေ့စတင်ရန်လိုအပ်သောအဆင့်များကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
အဆင့် ၁ - ကောင်းမွန်သောကူးယူကုန်သည်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်း
ပထမ ဦး စွာသင်မည်သည့်အတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည် ကူးယူပြီးသင်ယူပါ မှ။ သင်၏လမ်းပေါ်သို့ရောက်လာသောမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အကျိုးအမြတ်ကိုမဆိုသူတို့၏ကုန်သွယ်မှုကြိုးပမ်းမှု၏ရလဒ်များအားလုံးလုံးဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဟုသတိရပါ။
eToro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပေါင်း ၁၂ သန်းကျော်ရှိသောကြောင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကော်ပီကူးလိုသူများအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေကိုကူးယူရန်ခိုင်လုံသောစွမ်းရည်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သတိထား၍ ဆက်လက်စစ်ထုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင်သင့်ကိုအချိန်များစွာသက်သာစေလိမ့်မည်။ eToro တွင်အကောင်းဆုံးကုန်သည်များကိုသင်ရှာဖွေသောအခါရွေးချယ်စရာများစွာတွေ့ရလိမ့်မည်။
အချိန်ကာလ - ၎င်းသည်လက်ရှိလမှနောက်ဆုံး ၂ နှစ်အထိဖြစ်နိုင်သည်။
အခြေအနေ - အတည်ပြုပြီးနှင့်လူကြိုက်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြားရွေးချယ်မှု။
နိုင်ငံ - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတည်ရှိရာနေရာ (ဤအရာသည်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသည်ဟုမထင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကို 'နေရာတိုင်း' အဖြစ်ထားခဲ့ရန်သာအကြံပေးလိုပါသည်) ။
နာမည်နှင့်ရုပ်ပုံ - ဤသည်မှာသင်ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်ပုံသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏နာမည်ကိုမြင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ တနည်းကား, အတန်ငယ်ဆီလျှော်။
မိတ္တူများ - အပေါ်အခြေခံပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုရှာပါ လူမှုရေးကုန်သွယ် activity status.
စွမ်းဆောင်ရည် - Find investors based on return and profitable months.
အန္တရာယ် - Focus on risk score, daily drawdown, weekly drawdown.
အစုစု - ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပျမ်းမျှကုန်သွယ်မှုပမာဏပေါ် အခြေခံ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုရှာဖွေပါ။
လှုပ်ရှားမှု - Tသူ၏စစ်ထုတ်မှုကသင့်အားအသံပမာဏနှင့်ကုန်သွယ်မှုလှုပ်ရှားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ လူများကိုရှာဖွေစေသည်။
Filter တစ်ခုသို့မဟုတ်များစွာသောအသုံးပြုရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်ရွေးချယ်ပြီးနောက်“ apply” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည် 'go' ကို နှိပ်၍ ဖြစ်နိုင်သောကူးယူကုန်သည်များ၏ကျယ်ပြန့်သောစာရင်းကိုပြလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်မိတ္တူကူးသည့်ကုန်သည်၏ပရိုဖိုင်ထဲ ၀ င်နိုင်သည်။
eToro ရှိအကောင်းဆုံးကုန်သည်များကိုရှာဖွေသည့်အခါရရှိနိုင်သည့် filter များစာရင်းမှသင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်းလေ့လာရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
eToro တွင်အကောင်းဆုံးကုန်သည်များကိုရှာဖွေရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာကဤမက်ထရစ်ကိုလေ့လာရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးညွှန်ကိန်းဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်စင်မြင့်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးကတည်းကကုန်သည်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလုံးလုံးလျားလျားဖော်ပြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ကုန်သည်တစ် ဦး သည်အစိမ်းရောင်တွင် ၄၆% ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးပြီးလျှင်၊ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးလအနည်းငယ်အပေါ် အခြေခံ၍ သင်သိနိုင်သည်။ ရုတ်တရက်အားလုံးသည်ဤသည်အလွန်နည်းပါးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ကြီးမားသောအန္တရာယ်များကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းခိုင်မာသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အနည်းဆုံး ၁၂ လအတွေ့အကြုံရှိသောမိတ္တူကူးသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးလိမ့်မည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ဘယ်လိုလည်ပတ်သလဲဆိုတာကိုပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုသင်ပေးမှာပါ။
အတိုချုပ်ပြောရရင် AUM (Management Assets Under Management) ဟာကျွမ်းကျင်တဲ့ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုကူးယူနိုင်ဖို့သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ဖူးတဲ့ငွေပမာဏကုန်သည်များဖြစ်သည်။ ဤမေးခွန်းကိုမိတ္တူကူးကုန်သည်စုစုပေါင်းတန်ဖိုး၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုး။
သင်သည်ကူးယူခြင်းကူးယူခြင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားသည်ဟုယူဆလျှင်၊ သင်သည်“ ကူးယူသူ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမည်။ သင် eToro တွင်အကောင်းဆုံးကုန်သည်များကိုသင်ရှာဖွေသောအခါသင်သည်ကူးယူသူများနှင့်၎င်းအနီးရှိသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Twitter ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လူများမည်မျှလူကြိုက်များကြောင်းထင်ဟပ်သောနောက်လိုက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ ထိုကုန်သည်ကိုတိတိကျကျကူးယူနေသူမည်မျှရှိသည်ကိုသင့်အားစာသားအတိုင်းဖော်ပြသည်။
မိတ္တူကူးသူအမြောက်အမြားကြောင့်ကုန်သည်တစ် ဦး သည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိဟန်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်အားလုံးမဟုတ်ပါ။
ဤကိန်းဂဏန်းများသည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏အတွင်းပိုင်းသို့ရောက်ရှိရန်အလွန်ကောင်းသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်မည်သည့်အရာကိုဝယ်ယူရောင်းဝယ်သည်ကိုအသေးစိတ် ခွဲခြား၍ နားလည်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီ၏ပျမ်းမျှဆုံးရှုံးမှုနှင့်အကျိုးအမြတ်များကဲ့သို့သောစာရင်းဇယားများကိုလည်းသင်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရာထူးများသို့ ၀ င်ရောက်ထွက်ခွာသည့်အခါကုန်သည်များမည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုကြည့်ခြင်း၏ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်ဟုပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်သည်သည်မည်မျှစွန့်စားရကြောင်းကိုပြသရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အထူးစျေးကွက်များရှိပါကသင်ရောင်းဝယ်ရန်ရှာဖွေနေသည် cryptocurrency ကုန်သွယ် or စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်ဥပမာအားဖြင့် - ကုန်သည်သည်သင်ကူးယူလိုသောသူဟုတ် / မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဤအချက်အလက်သည်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ကုန်သည်၏ပျမ်းမျှအားအမြဲကြည့်သင့်သည်။ ဤအရာကိုရှာဖွေရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အောက်ဆုံးသို့သာလှည့်ပါ။ ကုန်သွယ်မှုပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နေ့၊ တစ်ပတ်သို့မဟုတ်လတစ်ကြိမ်ပျမ်းမျှရောင်းဝယ်မှု (ဥပမာ) ကဲ့သို့သောအရာများကိုပြနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်တစ်ပတ်လျှင်များများစွာကုန်သွယ်မှုမပြုပါကအခွင့်အလမ်းများမှာ၎င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောရေရှည်မဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်အထူးသဖြင့်တက်ကြွသောကုန်သည်တစ် ဦး သည်ရေတိုရာထူးများကိုပိုနှစ်သက်သည်။
ဤသည်ကို eToro မှပေးအပ်ထားသည့်ရွေးချယ်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပုံမှန်မွမ်းမံသည်။ စွန့်စားမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (စွန့်စားမှုမီတာ) ကို ၁ မှ ၁၀ မှ ၁ အတွင်းအကြားအနိမ့်ဆုံးပမာဏအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ၁၀ သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်သင်ကူးယူလိုသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုရွေးချယ်သောအခါသင်မည်မျှစွန့်စားရမည့်အရာမည်မျှရှိသည်ကိုသင့်အပေါ်လုံးလုံးဆုံးဖြတ်သည်။
အဆင့်နှစ် - အနိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘတ်ဂျက်
ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘတ်ဂျက်မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုစတင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ကျနော်တို့အစောပိုင်းကအပေါ်ကိုထိသကဲ့သို့, တစ် ဦး '' အကြံပြုလိမ့်မည် သင်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုမကူးယူမီအနည်းဆုံးလိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ။ သို့သော်၊ eToro သည်သင့်ကိုအစုရှယ်ယာဒေါ်လာ ၂၀၀ မှသာကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည် - သင်သည်ဤတံခါးခုံနှင့်ကိုက်ညီလျှင်သင်ကြိုက်သလောက်နည်းနည်းမျှသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ငွေကိုသင်၏ပွဲစားစာရင်းမှကုန်သည်များ၏အစုစုထဲသို့ (AUM သို့ထည့်သည်) သို့လွှဲပြောင်းလိမ့်မည်။
£20,000 worth of shares in RBS (20%).
£40,000 worth of shares in Halifax (40%).
£40,000 worth of shares in DHL (40%).
ဒီမှာကုန်သည်၏အစုစုသည်ပေါင် ၁၀၀၀၀၀ တန်သော်လည်း၊ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာ 'weighting' ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုစီနှင့်အစုရှယ်ယာအားလုံးမည်သည့်တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်မည်ကိုဆိုလိုသည်။
သင်၏အစုစုသည်တူတူဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကူးယူခြင်းကုန်သွယ်မှုအစုရှယ်ယာသို့ပေါင် ၄၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက၎င်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
20% of the copy trading portfolio is in RBS shares, totalling £800.
40% of the copy trading portfolio is in Halifax Shares, totalling £1600.
40% of the copy trading portfolio is in DHL Shares, totalling £1600.
သင်သည်သင်၏မိတ္တူကူးယူသူကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ဘာမှလုပ်စရာမလိုသော်လည်းသူတို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကူးယူရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသမျှကာလပတ်လုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သင်၏ကိုယ်စားစတော့ရှယ်ယာများနှင့်အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူရောင်း ၀ ယ်နေသည်ကိုသတိရသင့်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုန်သည်သည် HSBC ရှိအစုရှယ်ယာအားလုံးကိုရောင်းရန်ရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါကသင်၏ HSBC ရှယ်ယာများကိုလည်းရောင်းမည်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ကုန်သည်များက Microsoft ကိုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်သင့်မှာ Microsoft ရှယ်ယာများလည်းရှိသည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာ eToro မှကူးယူသူများသည်လမ်းတစ်လျှောက်အပိုရန်ပုံငွေများကိုသယ်ဆောင်လေ့ရှိကြသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းတို့သည်သူတို့၏အစုစုကိုပိုမိုပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ၊ သင်ရွေးစရာ ၂ ခုကျန်ပါလိမ့်မယ်။
ရွေးချယ်မှု ၁ - ရန်ပုံငွေပိုထည့်ပါ
An investor will usually make an announcement when they are planning on adding additional funds in order to give you enough time to make arrangements.
သင်ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ၊ ကုန်သွယ်မှုကိုကူးယူရန်ဖြစ်သည်ဟုပြောရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလုပ်နေသည့်အရာကိုအမှန်တကယ်ထင်ဟပ်လိုပါကသင့်အနေဖြင့် (နှင့်အချိုးကျ) ရန်ပုံငွေများကိုအလိုလျောက်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ပေါင် ၂၅၀၀၀ တန်ဖိုးရှိအစုရှယ်ယာတစ်ခုရှိပြီးပေါင် ၅၀၀၀ ထပ်ထည့်သည်ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကရာနှုန်းကို ၂၀% တိုးလာသည်။
အခုဆိုပါစို့ သင့်ရဲ့ portfolio hasavalue of £1,000, you are going to need to add £200 (20% of £1,000).
Option2- Auto Adjustment
ဤပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းက eToro သည် ၀ ယ်ယူမှုအသစ်အတွက်နေရာလွတ်ပေးရန်သင်၏ရှယ်ယာအချို့ကိုရောင်းချရန်မှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဟုဆိုလိုသည်။ သင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူကိုသင်ကူးယူနေ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းအလေးအနက်စဉ်းစားရမည့်အရာတော့မဟုတ်ပါ
အဆင့်ငါး: Copy Trading မှတဆင့်ငွေရှာ
သင့်တွင်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ် ETFs တွင်အတွေ့အကြုံရှိပါကမိတ္တူကူးခြင်းမှမည်သို့အကျိုးအမြတ်ရရှိမည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အမြတ်အစွန်းများနှင့်အရင်းအနှီးမှအမြတ်အစွန်းများရရှိခြင်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်သည့်နည်းတူသင်ငွေရှာလိမ့်မည်။
မင်းဟာပေါင် ၁၀၀၀၀ ကိုကူးယူရောင်းဝယ်မှုအစုစုထဲကို ၀ ယ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့၊ အဲဒီအစုစုထဲမှာရှယ်ယာ ၅၀ ရှိတယ်။
ပထမနှစ်အကုန်တွင်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် ၁၀% တက်သွားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏မိတ္တူကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုပမာဏသည်ပေါင် ၁၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ရာထူးမှထွက်ခွာသောအခါသင်၏အမြတ်သည်ပေါင် ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။
သင်ကူးယူနေသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်သင်လုံးဝစိတ်မဝင်စားသောကဏ္ in တစ်ခုတွင်စတော့ရှယ်ယာများဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
လူအချို့ကတစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ ကူးယူရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ထက်မကအသုံးပြုလိုကြသည်။ ဤသည်ကသင့်အားကုန်သည်များစွာကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်ခွင့်ပြုသည် - သင်၏လမ်းရှည်နှင့်သင်၏ရေရှည်အန္တရာယ်ကိုထပ်မံလျှော့ချနိုင်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ eToro မှာအကောင်းဆုံးကုန်သည်တွေဟာကူးယူမိတဲ့သူများများစားစားမဟုတ်ကြဘူး။ ဒါကြောင့်သင်တတ်နိုင်သမျှအချက်အလက်များကိုအမြဲလေ့လာပါ။ မိတ္တူကူးခြင်းနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုကောင်းစွာနားလည်ထားခြင်းအပြင်ဤအသိပညာသည်သင့်အားရေရှည်တွင်သာကူညီလိမ့်မည်။
အဖြေကအမည်းရောင်၊ အဖြူရောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ရိုးရာအရောင်းအ ၀ ယ်တွေလိုပဲအမြတ်ရဖို့အလားအလာများတယ်။ သို့သော် ၁၀၀% အာမခံချက်လုံးဝမရှိပါ။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအပေါ်လုံးဝမှီခိုနေရသည်။
မိတ္တူကူးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ထက်ပိုပြီး 'ကူးယူ' ခြင်းသည်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဥများအားလုံးကိုခြင်းတောင်းထဲ၌ထည့်ခြင်းမဟုတ်သောဂန္ထဝင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၊ အကယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်ကြို့ထိုးမှုအနည်းငယ်ရှိပါကအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသင်မခံစားရပေ။ ဟုတ်ပါတယ်, ကုန်သွယ်မှု၌ 100% အန္တရာယ်ကင်းစင်သည်။
မိတ္တူကူးခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်အသုံးပြုသောမိတ္တူကူးယူသည့်ပလက်ဖောင်းအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် eToro သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မည်သည့်အရာမဆိုငွေမသွင်းပါ။
ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေကတော့မဟုတ်ဘူး။ ၀ ယ်ရောင်း ၀ ယ်မည့်အစုရှယ်ယာများအားလုံးကိုကုန်သည်ကလုံးဝဆုံးဖြတ်သည်။ ထိုသို့ပြောပြီးပါက၊ သင်သည်ထိုကဏ္ in ကိုစိတ်မဝင်စားလျှင်ရာထူးကိုပိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည့်သင့်အစုစုကိုနေရာချခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။